Ganaaxa Gaadiidka Dadweynaha Tuuganimada lagu Raaco - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ganaaxa Gaadiidka Dadweynaha Tuuganimada lagu Raaco
La daabacay torsdag 2 augusti 2012 kl 13.32
Inta ay la eg tahay lacagta lagu ganaaxo dadka raaca gaadiidka dadweynaha bilaa tigid la'aan ayaa kala gadisan gobalada dalka. Inta badan gobalada dalka ayuu ganaaxu ka raqiisanyahay qiimaha uu jooga kaarta 30:ka maalmood ah.
Qaymaha ganaaxa waxaa go'aamiya hay'adaha gobalada gaadiidka dadweynaha. 16 kamid ah 21:ka gobal ee dalkaan ayuu kaarta bisha ah ka qaalisanyahay ganaaxa la saaro marka ay qabtaan kuwa koontaroolka biljetka.
tusaale Gobalka Västmanland ayuu kaarka bisha ah ee gaadiidka lagu raaco qiimahiiso yahay 1135 karon, halk ruuxa raaca gaadiidka kaar laan uu ganaaxiiso yahay 500 oo karoon kaliya.
Jan Eric Nilsson oo ah cilmaari u qaabilsan hay'ada dowligaa ee Statens väg- och transportforskningsinstitut, ayaa aaminsan in loo baahan yahay in la darso sida ay u saamayso sacotada cinqaabta ganaaxa ah.
Isku geyn qaymaha ay ku fadhido ganaaxa iyo suurta galnimada in uu qof la kulmo kontoroolka biljetiga labadaas ayaa aas aasi u ah qofka sida tuugnimadaha ku raaca gaadiidka dadweynaha.